I-Arduino yokubamba ingqungquthela ye-covid-19 ngomso - I-Ocean-Components.com
IkhayaIindabaI-Arduino yokubamba ingqungquthela ye-covid-19 ngomso
Iya kuvulelwa "nakubani na osebenzisa izixhobo ze-Arduino ngokuhambelana neprojekthi ukuyila kunye nokwenza i-ventilators, ii-respirators okanye ezinye izixhobo ukulwa i-covid-19. Ngaba bangabagqirha, abafundisayo, inkampani yobungcali, umphandi oqeqeshiweyo okanye umntu owenza izinto ezintsha - bonke bamkelekile ukuba bazibandakanye, ”ngokutsho kombutho.
Injongo yale nkomfa kukwabelana ngezimvo, kunye nokunciphisa inani eliphindiweyo leArduino eyazi ngalo: Kukwakho namaqela amaninzi anamandla ahlukeneyo kunye neeseti zezakhono ezingasebenza ngcono kunokubambisana. ”
Abathathi-nxaxheba baya kunikwa uncedo kwezi zinto zilandelayo:
uyilo kunye nokwenza izixhobo
Ukuthatha isikhokelo koochwephesha
Into yokugqibela, ibaluleke kakhulu, ngokutsho komseki weArduino uDavid Cuartielles kunye noMassimo Banzi: "Ukuze bakwazi ukuhambisa iimfuno kwaye baqinisekise ukuba uyilo luza kuba negalelo elihle", owongeze wathi: "Kufuneka senze ngcono, siphumelele, sebenzisana kwaye ndidibanise imizamo yokucombulula ezi ngxaki kunye nokufikelela ngokukhawuleza iinjongo zethu ezifanayo nangobuchule. ”
Iwebhusayithi yenkomfa ilapha
Ngokuka-Arduino, iyazi inani elikhulu leeprojekthi ezisekwe eArduino zokuncedisa abasebenzi ababalulekileyo ngexesha lokuqhuma kwe-covid-19. "Sifikelele ekunikezeleni ngoncedo lwethu, sinikezela ngesixhobo esithile sekhompyuter, sinika inkxaso yobunjineli kwaye senze nantoni na esinokuyenza."
Kuye kwacelwa iiyunivesithi, amaziko ophando kunye neenkampani zibuze malunga nokufumaneka kweenombolo eziphezulu zebhodi zaseArduino - ngokukodwa i-Uno, Mega, Nano kunye neNano 33 BLE-ukuxhasa ukwenziwa kwezixhobo zokhuselo lobuqu (i-PPE), ii-ventilators kunye nezinye izixhobo .
"Ekuphenduleni sibeke phambili ezi projekthi zibalulekileyo ngokuthengwa kwethu kunye nokuhambisa
Yayilulwazi kwezi projekthi zivelise ukuphindwa koyilo kunye namathuba kwintsebenziswano.
Iforum yase-Arduino yeeprojekthi ze-covid-19 ilapha